musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Italy Kuputsa Nhau » Venice ikozvino iri kubhadharisa vashanyi mari yekupinda
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Italy Kuputsa Nhau • nhau • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
Venice yakabhadhara zvitenderedzwa zvichidzoka
Venice yakabhadhara matendeguru anoita kudzoka kwevashanyi kupinda muguta. Denda harina kukanganisa chinetso chekukurumidzira icho chaitoita senge chakasarudzika chakagadziriswa muVenice, Italy - iya yekushanya pamusoro. Kuwanda kwevashanyi uko, kunyangwe paine kushomeka kwese kwekuyerera kubva kunze kwenyika, kwakaratidzawo iri zhizha reVenetian.
Tichifungidzira kupinda kwevashanyi gore rinouya, Venice ichadzosa zvigadziriso kuitira kuti vashanyi vade kubhadhara kuti vapinde muguta.
Chiitiko chekutendeuka chakatambwa mu2018 asi hachina kubudirira uye vagari vaive mumhirizhonga.
Iwo maiturnstiles matsva anozove neaverengi ekuverenga umo vagari, vadzidzi, uye vashandi vanozove nekiyi chaiyo pamafoni avo ekuwana mahara.
Chisarudzo chakasiiwa chakarembera mudenga kwechinguva zvino chichaiswa kudzora huwandu hwevashanyi vanoshanyira Venice.
Meya weVenice Luigi Brugnaro
Gore rinotevera, muna 2022, guta guru reVenetian ichaisa mumigwagwa yayo nhevedzano yetendeji yakashongedzerwa nevaverengi vemaziso, inozove yepamusorosoro kupfuura magedhi anozviitira wega anoedzwa muna 2018, kuburikidza nawo chete avo vakatsvaga kushanya kunzvimbo yekuenda kana kugara mukati nzvimbo yekugara inogona kupinda.
Pachave zvakare nemubhadharo wekuwana we10 euros inobhadharwa. Vagari, vafambi, uye zvimwe zvikamu vachasunungurwa pamitero. Chinangwa ndechekudzivirira kuwandisa kwevashanyi iyo inotonyanya kutarisirwa post COVID.
"Tichasarudza zvichibva pahunyanzvi, [uye] isu tichasarudza pekuisa," akadaro manejimendi achitungamirwa naMeya weVenice Luigi Brugnaro, achiwedzera, "MunaJune, kuratidzwa kwekufarira kusarudza magedhi akanakisa, kune mana makambani akagadzirira kuratidza zvirongwa zvavo. ”
Miedzo yekutanga ichatanga munaGunyana. Ichaitirwa pachitsuwa cheTronchetto, muzasi wehofisi yemapurisa emunharaunda uye panowanikwa imba yekuchenjera.
Vagari, vashandi uye vadzidzi vanofamba kuenda kuguta mazuva ese vanokwanisa kupinda nekutenda kune chaiyo kiyi pafoni yavo. Vashanyi, panguva iyi, vaifanirwa kutora nzvimbo dzakasara zvisati zvaitika, vobva vatarisa imwe tikiti kuti vapinde mune imwe yenzvimbo dzekupinda idzi.
Muna Chikumi, Gurukota rezvehutano reItaly, Roberto Speranza akazivisa kuti Italy inobvumidza maAmerican kupinda munyika pasi pezvinodiwa zvakafanana neGreen Certificate yeEU. Izvi zvinoreva kuti vafambi veUS vanogona kuratidza chero humbowo hwekubaiwa, chitupa chekudzoka kubva kuCOVID-19, kana yakaipa PCR- kana yekukurumidza-antigen bvunzo yakatorwa mukati maawa makumi mana nemasere ekusvika vanogona kuenda kunyika yeMediterranean vasina kuvharirwa pavanosvika.
Nyamavhuvhu 24, 2021 pa06: 34
OMG..Venice ndiyo nyowani Disneyland !!!